Zvinhu zvidiki zvakakosha mukicheni - Fenicha - kurudziro
Zvinhu zvidiki zvakakosha mukicheni
Kukadzi 16, 2019 Kukadzi 16, 2021 arun Imba yekubikira, Kicheni yanhasi
Mhuri yese inosangana mukicheni. Kuti iwe unzwe kugadzikana kana uchibika kana kudya, hazvina kukwana kuti zvive chete nekicheni unit, tafura nemacheya. Zvakawanda zvinodiwa kuti unakirwe nekubika uye chikafu.
Wese munhu anoda yakawanda nzvimbo kana uchibika. Muimba yemhuri, unogona kuigadzira nekuisa nyore chiwi chekicheni kana kuwedzera kicheni kicheni. Nekudaro, maitiro azvino mukupa anofarirawo makamuri madiki. Iwe unowana nzvimbo yakakwana yekuchengetedza midziyo yekicheni nerubatsiro rwevagadziri vekicheni. Isa nzvimbo dzakaturikwa pamusoro peiyo kicheni unit. Kutenda kwavari, iwe uchagara uine anowanzo shandiswa maturusi aripo. Uye zvakare, masisitimu ekumisa anotaridzika zvakanaka. Midziyo yekicheni inozadzikiswa nevarongi uye mativi emadhirowa. Ivo vanozokubatsira iwe kugadzira akapatsanurwa maforodha kuitira kuti iwe ugare uchigona kuwana yako ndiro nekukurumidza. Mumakabati, iwe unozokoshesa kudhonza-kunze kwemabhasikiti emidziyo uye chikafu. Mamwe maraki emapani kana mabheji anochengetedza imwe nzvimbo.
Midziyo yekicheni inosanganisirawo zvishongedzo. Kune kushanya kwakakura, iwe unozokoshesa matafura ekushandira. Iwe unogona kusarudza tafura yekushandira pamavhiri kana isina. Nekushandisa zvirinani nzvimbo, tafura yekushandira ine masherufu akati wandei yakakodzera. Iyo inoshanda yekicheni michina inosanganisira sherefu ine mabhasikiti. Ino inzvimbo yakakodzera yekuchengetera mapeke, michero kana zvidiki zvakasiyana. Iwe uchararamisa kicheni yako nemasherufu pamadziro.
Kugadzirira mukicheni nezvose zvaunoda hakuperi nemidziyo nenhumbi. Mukicheni zvakakosha zvikuru kutarisisa zvakakwana mamiriro emwenje. Central yekubatidza mwenje inowanzo kuve iri pakati pekamuri. Iwe unogona zvakare kuiisa pamusoro petafura kana kicheni chitsuwa. Sarudza mamwe mwenje kuvhenekera nzvimbo yebasa pamutsetse. Mhinduro yakakodzera ndeyemwenje yakati wandei kana kuvhenekesa kicheni nemabhande eLED.
Anowana mhando dzakasiyana dzemidziyo nemidziyo yemukicheni kumutengesi HERE.
Zvigaro zvakagadzikana zvine dhizaini dhizaini
Sei kusarudza hotera fenicha?